Famerenana boky Archives - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Famerenana ny boky: "Fanabeazana amin'ny fivoarana: Vol 3" avy amin'i Magnus Haavelsrud
Febroary 5, 2021 0
Ao amin'ny bokiny farany, Magnus Haavelsrud dia mahita ny fivoaran'ny fandriam-pahalemana ho fihetsiketsehana ambony amin'ny fahamendrehana, fiaraha-miory, fanasitranana traumas taloha sy ankehitriny, ary fanovana fifandonana tsy misy herisetra. Haavelsrud dia manontany sy mamaly ny fomba ahafahan'ny fanabeazana manohana sy manomboka ny hetsika miakatra toy izany manomboka amin'ny ambaratongan'ny fiainana andavanandro mankany amin'ny raharaha manerantany. [tohizo ny famakiana…]
Ny laharana vaovao an'ny Factis Pax dia misy izao: Boky faha-14 isa 2, 2020
Febroary 4, 2021 0
Volana faha-14 isa 2, 2020 an'ny In Factis Pax, gazety fanabeazam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana ara-tsosialy, nohamarinina ankehitriny. [tohizo ny famakiana…]
Ny fihodinan'ny fifanakalozan-kevitra: fanadihadiana momba ny “fananganana fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra: fanabeazana, fanovana olona ary famahana ny fifanolanana”
Desambra 11, 2018 0
Ny "Peacebuilding Through Dialogue" dia fanangonana sarin-teny sarobidy momba ny dikany, ny fahasarotana ary ny fampiharana ny fifampiresahana. Ny famoriam-bola dia mampandroso ny fahalalantsika ny fifanakalozan-kevitra sy ny fampiharana azy amin'ny sehatra maro sy samihafa. Ity lahatsoratra famerenana nataon'i Dale Snauwaert ity dia mamintina taratry ny fifanakalozan-kevitra manokana amin'ny sehatry ny fanabeazana, arahin'ny fandinihana ny fiovan'ny dinika eo amin'ny filozofia ara-pitondrantena sy politika. [tohizo ny famakiana…]
Evelin Lindner's Blue Planet Perspective amin'ny fanovana fanalam-baraka sy fampihorohoroana
Septambra 19, 2018 0
Amin'ity lahatsoratra famerenana ity dia nanoratra i Janet Gerson fa ny fahafantarana an'i Dr. Evelin Lindner sy ny boky vaovao "Voninahitra, fanalam-baraka ary fampihorohoroana: fifangaroana mipoaka sy ny fomba ahafahantsika manala azy amin'ny fahamendrehana" dia ny fitadiavana fomba transdisiplinary vaovao hamahana ireo krizy lehibe amin'ny ny fotoantsika. Ny tanjony dia ny “fikatrohana ara-tsaina” napetraka tamin'ny alàlan'ny “fomba fahitan'ny mpanao hosodoko, dia fitadiavana ambaratonga vaovao misy dikany.” [tohizo ny famakiana…]
Famerenana boky: Fanabeazana miaraka amin'ny voan'izao rehetra izao
Septambra 6, 2018 0
"Fanabeazana miaraka amin'ny voan'izao tontolo izao," natontan'i J. Denny Weaver, dia manasongadina ny teolojika ho an'ny fanabeazana fandriampahalemana Anabaptist-Mennonite. [tohizo ny famakiana…]
Famerenana boky - Ho an'ny vahoaka: Tantaran'ny fanadihadiana momba ny tolona ho an'ny fandriampahalemana sy ny rariny any Etazonia
Jona 22, 2018 0
"Ho an'ny vahoaka: tantaram-panadihadiana momba ny tolona ho an'ny fandriam-pahalemana sy fahamarinana any Etazonia," natontan'i Charles F. Howlettt sy Robbie Lieberman, dia andiany iray amin'ny andiam-baovao Information Age Press: Peace Education, natontan'i Laura Finley & Robin Cooper. Ity famerenana ity, nosoratan'i Kazuyo Yamane, dia iray amin'ireo andiany niara-namoaka ny Global Campaign for Peace Education and In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice momba ny fampiroboroboana ny vatsim-pianarana momba ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Fandriampahalemana maharitra: Jeffery Sachs “Ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana maharitra”
Oktobra 1, 2017 3
Ny teôria Jeffery Sachs momba ny fampandrosoana maharitra, araka ny voatonona ao amin'ny boky mahatalanjona, tany am-boalohany ary manome aingam-panahy, The Age of Sustainable Development (New York: Columbia University Press, 2015), dia manolotra rafitra fandalinana sy famaritana feno momba ny fiheverana ny fandriam-pahalemana, ny zon'olombelona sy ny fahamarinana manerantany ary ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Famerenana ny boky - Rafitra fiarovana manerantany: safidy hafa amin'ny ady. Fanontana 2016
Jolay 12, 2017 0
Rafitra fiarovana manerantany no mamintina tolo-kevitra sasantsasany momba ny famaranana ny ady sy ny famolavolana fomba hafa hisorohana ny filaminana manerantany izay nandroso nandritra ny tapaky ny taonjato lasa. Ny tatitra dia nanamafy ihany koa fa azo atao ny fandriam-pahalemana maharitra ary rafitra fiarovana hafa ilaina hahazoana izany. Ankoatr'izay, tsy ilaina ny manomboka amin'ny rangotra; ny ankamaroan'ny fototra ho an'ny rafitra fiarovana hafa dia efa mipetraka. [tohizo ny famakiana…]
Famerenana ny boky: Fahatakarana ny kolontsaina fandriam-pahalemana
"Ny fahatakarana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana," natontan'i Rebecca L. Oxford, dia andiany iray ao amin'ny andian-dahatsoratra Information Age Press: Peace Education, natontan'i Laura Finley & Robin Cooper. Ity famerenana ity, nosoratan'i Sandra L. Candel, dia iray amin'ireo andiany niara-namoaka ny Global Campaign for Peace Education and In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice momba ny fampiroboroboana ny vatsim-pianarana momba ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]